Waqtiga isbedelka. Ma u baahan tahay xeerar cusub oo ku saabsan isticmaalka sunta cayayaanka? - PotatoSystem
Saynisyahanno ka socda Jaamacadda Aarhus, Denmark, Xarunta Cilmi-baarista Agroscope, Switzerland, iyo Dugsiga Beeraha Qaranka ee Vetagro Sap, Faransiiska, ayaa maqaal ku soo daabacay joornaalka Madasha Siyaasadda Sayniska, iyagoo ku baaqaya in dib loo eego qaab-dhismeedka sharciyeed ee qeexaya sida loo isticmaalo sunta cayayaanka. Christopher Topping, Annette Aldrich iyo Philip Burnie waxay soo jeedinayaan in nidaamka hada jiraa uu yahay mid gaboobay loona baahan yahay in la badalo.
Qorayaashu waxay xusayaan in inta badan xeerarka isticmaalka sunta cayayaanka ee xoog looga isticmaali karo Yurub, Mareykanka iyo dalal kale oo badan laga qaatay horaantii 1990-meeyadii iyadoo lagu saleynayay mabda'a "hal sun-dil - hal dalab", taasi waa, sunta cayayaanka lagu tijaabiyey hal dalag oo keliya.
Hadda xaalladii waa isbedeleen. Sunta sunta cayayaanka ayaa loo adeegsadaa dalagyo fara badan.
Fahanka saameynta sunta cayayaanka ay u leedahay deegaanka ayaa sidoo kale isbedelay - xog cusub ayaa ka soo baxday saameynta beero-nafsiga ee cayayaannada aan la beegsan, shimbiraha iyo xayawaannada kale, wabiyada, durdurrada iyo xitaa badaha, marka walxaha firfircoon ee alaabada difaaca dhirta ay galaan wareegga biyo-biyoodka.
Qorayaashu waxay rumeysan yihiin in beddelaadda nidaamka dabadheer ee xeerarka sunta cayayaanka ee waddammada kala duwan oo leh 'hooseeyaha loo wada dhan yahay' ay noqon doonto horumar ballaaran, iyadoo ay jiraan dhibaatooyin badan. Si kastaba ha noqotee, tani waa inay dhacdaa.
Khubaradu waxay xusayaan in badalida xeerarka aysan qasab ku noqon doonin waxyeello dhaqaale beeralleyda - qawaaniinta adag waxay gacan ka geysaneysaa ka hortagga adeegsiga aan loo fiirsaneyn ee alaabada ilaaliya dalaga iyo go'aaminta saxda iyo meesha laga mariyo walxaha kiimikaad. Waxay ku boorinayaan dalalku inay gacmaha is qabsadaan dadaalkan, maadaama weli ay jiraan kala duwanaansho weyn oo xagga shuruucda ah oo u dhexeeya dowladaha - tusaale ahaan, Midowga Yurub wuxuu dhowaan mamnuucay chlorpyrifos maxaa yeelay wuxuu la xiriiraa dhibaatooyinka caafimaad ee carruurta, laakiin Mareykanka ayaa u oggolaaday dalabkaas sababtoo ah EPA (Wakaaladda loogu talagalay Wakaaladda Ilaalinta Deegaanka ee Mareykanka) kama aqbalin qiimeynta EU. Isku duubnaan caalami ah oo ku saabsan daawo gaar ah ayaa xallin doonta dhibaatada.
Ugu dambayntiina, qorayaashu waxay soo gabagabeeyeen in marka la abuurayo nidaam sharciyeed oo cusub, ay tahay in la tixgeliyo aalado u saamaxaya in guud ahaan bulshada looga wargaliyo halista sunta cayayaanka qaarkood.
Source: agro xxi.ru (sida laga soo xigtay phys.org).
Tags: Sunta cayayaanka